राजनीतिक “महाभोज”- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — अपराध र राजनीतिको नेक्ससले गाँजेको एउटा विद्रुप र विसंगत समाजका रूपमा तराई क्षेत्रको एउटा सीतापुर गाउँ छ । जहाँ विधानसभाका लागि एउटा सिटको चुनाव हुन लागेको छ । यसै क्रममा सीतापुरको उक्त दलित बस्तीमा आगजनी हुन्छ । दर्जनौं मान्छेको हत्या गरिन्छ ।
जसको साक्षी विश्वेश्वर अर्थात् बिशु हुन्छ । ऊ आफूसँग भएको हत्याकाण्डको प्रमाण राजधानी लगेर पर्दाफास गर्न चाहन्छ । तर त्यसअघि नै उसको मृत्यु हुन्छ । नाटक ‘महाभोज’ को कथा यहाँबाट बल्ल सुरु हुन्छ ।
रंगकर्मी अनुप बराल यतिबेला भारतीय लेखिका मन्नु भण्डारीको उपन्यास ‘महाभोज’ लाई नाट्य रूपान्तरण गरिरहेका छन् । अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा भदौ १४ देखि नियमित मञ्चनमा जाने गरी निर्देशक बराल यतिबेला कलाकारलाई रिहर्सल गराइरहेका छन् ।
विप्लव प्रतीकले अनुवाद गरेको यस नाटकलाई मण्डला थिएटरले प्रस्तुति गर्न लागेको हो । रोचक के भने कविको अब्बल छवि बनाएका विप्लव यही नाटकमार्फत कलाकारको रुपमा समेत देखिँदैछन् । लेखिका मन्नुले ७० को दशकको भारतीय समाज र राजनीतिक सन्दर्भलाई हेरेर उपन्यास लेखेकी हुन् ।
झन्डै ५० वर्ष पुरानो कथालाई नाटकका लागि छनोट गर्नुको उपदेयताबारे प्रस्ट्याउँदै निर्देशक बरालले भने, ‘भलै ७० को दशकको भारतीय सन्दर्भसंग जोडिएको किन नहोस्, यसको कन्टेन्ट अहिले हाम्रो सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सामयिक छ ।’ खासगरी सामाजिक रूपमा सान्दर्भिक नाटकहरू नै पस्कन रुचाउने बरालले थपे, ‘यो उपन्यास पढिरहँदा मलाई ठयाक्कै उसैगरी नभए पनि टीकापुरको घटना, निर्मला हत्याकाण्ड, कर्मचारीतन्त्रमा हुने नेपोटिज्म, राजनीतिक षड्यन्त्र, आपराधिक गतिविधि, सीमान्तकृत वर्गमाथिको भेदभाव आदि कुराको सम्झना गराउँछ ।’
नाटकमा बिशुको हत्या अनुसन्धानका लागि इन्स्पेक्टर रिता चाम्लिङको नेतृत्वमा टोली खटाइएको छ । रिताको भूमिकामा अभिनेत्री सृजना सुब्बाले अभिनय गरेकी छन् । रिहर्सल चलिरहँदा पनि उनी हत्या गरिएका बिशुका साथी विनोदलाई केरकार गरिरहेकी थिइन् ।
अन्तत: विनोदलाई पनि राजनीति र अपराधको कुचक्रमा फसाएर जेल कोचिन्छ । जातिगत समीकरण कसरी नेपालको स्थानीय राजनीतिको अनिवार्य अंग बन्दै आएको छ र पिछडिएका सिमान्तीकृत जातिमाथि हुने अत्याचार र यसले जन्माएको अन्तरविरोध नै नाटकको केन्द्रीय चिन्ता रहेको निर्देशकको दाबी छ ।
उनका अनुसार, नाटकमा नैतिकता, अन्तरद्वन्द्व, अन्तरविरोधसँग जुझिरहेका सत्ताधारी वर्ग, प्रतिपक्ष, मिडिया र कर्मचारीतन्त्रका अवसरवादी चरित्रहरूमाथि व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति रहेको छ । जनतालाई केवल मतदाताका रूपमा मात्रै लिने र आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरूको जीवनलाई नै गोटी बनाउन पछि नपर्ने नेताहरू कसरी निर्दोष, दीनहीन जनताको सपना र सुखलाई खोसेर सत्ताको महाभोजमा सामेल हुन्छन् भन्ने सन्देश नाटकले दिने अपेक्षा बरालको छ ।
निर्देशक बरालले नाटक हेरेपछि दर्शकलाई भावनात्मक बनाउनुभन्दा विचारोत्तजक बनाउनु सफलता हुने जिकिर गरे । भने, ‘नाटकको प्रस्तुतीकरण अहिलेको चल्तीको भन्दा केही भिन्न बनाउन खोजिएको छ । दर्शकलाई दृश्यसँगको भावनात्मक सम्बन्धबाट बाहिर निकाल्न ब्यानर, मल्टिमिडिया प्रोजेक्सन र गीत संगीत आदिको उपयोग गरिएको छ ।
तर यस नाटकको उद्देश्य दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनु वा यथार्थ चित्रण गर्नुमा भन्दा घटनाको वैचारिक मन्थन होस् भन्ने चाहन्छ । नाटक हेरेपछि दर्शक भावनाको कैदी नभई मानसिक रूपमा शिक्षित भई फर्किऊन् ।’ बरालले ‘महाभोज’ लाई एपिक थिएटरको शैलीमा प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
निर्देशकले मञ्चमा रमेश बुढाथोकी, विप्लव प्रतीक, दयाहाङ राई, राजन खतिवडा, शेखर चापागाईं, सृजना सुब्बा, बुद्धि तामाङ, विकास जोशी, विजय बराल, प्रदीपकुमार चौधरी, सोमनाथ खनाल, घनश्याम जोशी, मिलन कार्की, सागर दाहाल, आरजेश रेग्मी, रिजन परियार, सिके विष्ट, सपना चौधरी, रञ्जना ओली, उमेश तामाङ, राज न्यौपानेलगायत २८ कलाकारको जम्बो टोलीलाई स्टेजमा उतार्न लागेका छन् ।
बरालले ठूलो कास्ट एन्ड क्रु लिएर नाटक गर्नु चुनौतीपूर्णसँगै रोमाञ्चक पनि हुने टिप्पणी गर्दै यस्तोमा ब्लकिङ र कम्पोजिसन गर्न साह्रै मज्जा आउने बताए । भने, ‘यस्तो अवस्थामा म आफूलाई केवल निर्देशकका रूपमा मात्रै नभई पेन्टर, कवि र दर्शकको भूमिकामा समेत राखेर हेर्छु ।’
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०८:५४
थारु गाउँमा मोडलै मोडल
बर्दिया — केही वर्षअघिसम्म थारू भाषाका म्युजिक भिडियो वर्षमा मुस्किलले एक/दुईटा बन्थे । अहिले जमाना बदलिएको छ । एकै दिन थारू भाषाका तीन म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भए ।
शुक्रबार चम्पन सांंस्कृतिक समूहले ‘अंग कही पाटिर धनिया रे’, गोचाली मिडियाले ‘ओ माई डियर’ र कैलाली म्युजिकले ‘कन्दरा लडियाके जुर पानी’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरे । ‘ओ माई डियर’ डिजे गीत हो । दुई गीत थारू संंस्कृतिसँग जोडिएका छन् । थारू भाषाका फिल्मले व्यावसायिक सफलता नपाइरहेका बेला म्युजिक भिडियोले भने बजार तताएका छन् ।
म्युजिक भिडियोसँगै थारू कलाकारको माग पनि बढ्न थालेको छ । थारू समुदायमा एकसे एक मोडल देखिन थालेका छन् । म्युजिक भिडियोको लहरले थारू युवायुवतीलाई छोएको छ । कतिपय मोडल व्यावसायिक बन्दै गएका छन् । केहीले आफ्नै निजी लगानीमा लहडमै म्युजिक भिडियो निर्माण गरिरहेका छन् । केही मोडलले
रामै्र पारिश्रमिक पाइरहेकाछन् । युटयुबमार्फत सार्वजनिक हुने भिडियोका भ्युअर पनि बढेका छन् ।
पछिल्लो समय थारू भाषाको भिडियो निर्माण गर्न स्पर्धा नै चलेको छ । कलाकारहरूले आफूलाई टिकाउन प्रयासरत छन् । बारबर्दिया नगरपालिका धधवारकी आशा चौधरी निरन्तर दुई वर्षदेखि मोडलिङमै छिन् । हाल उनी चल्तीको कलाकारका रूपमा चिनिएकी छन् ।
१८ वर्षीया सुन्दरीले मोडलिङ गरेको ‘मै तो हुई गिनु दिवाना, तुहार नाउमे हुईनु कुर्बान’ लगायतका आधा दर्जन भिडियो थारू युवामाझ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बने । ‘थारू भाषाको भिडियो धेरै नबनेको भए मैले यो अवसर पाउन मुस्किल हुन्थ्यो । तर, सहजै भिडियो खेल्ने अवसर पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘खासमा अहिलेका युवायुवती मोबाइलमार्फत् सामाजिक सञ्जालमा जोडिएकाले थारू भिडियोको लोकप्रियता बढेको हो ।’
एउटा म्युजिक भिडियोमा खेलेबापत् १० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने गरेको उनले बताइन् । यसले पनि थारू म्युजिक भिडियोको व्यावसायिकता बढ्न थालेको देखाउँछ ।
बर्दिया बबई नगरपालिका–३ घर भई हाल नेपालगन्जमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका मोडल राजकुमार थारूले आÏनै लगानीमा चार म्युजिक भिडियो खेलेका छन् । एउटा भिडियोका लागि कम्तीमा ५० हजार खर्च लाग्ने उनले बताए । आफैं मोडल भएकाले उनलाई मोडलिङको पारिश्रमिक तिर्नुपरेको छैन ।
आफ्नै लगानीमा थारू भिडियोप्रतिको यति धेरै मोह किन ? ‘थारू भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र आफूभित्र रहेको कलालाई प्रस्तुत गर्नका लागि भिडियो बनाउँछु । कलाकारितामा मेरो रुचि छ,’ उनले भने, ‘कलाकारको पहिचान पाउनु मेरा लागि ठूलो सम्पत्ति हो ।’ उनी दसैं पर्वलाई लक्षित गरी अर्को भिडियो बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
उनको ‘झुम्कावाला बठिनिया’ भिडियो युटयुबमा तीन लाख बढीले हेरेका छन् । थारू भिडियो अपलोड गर्न थुप्रै युटयुब सञ्चालनमा आएपछि प्रचारप्रसारमा सहज भएको उनले बताए । हातहातमा मोबाइलमार्फत सहजै हेर्न सकिने भएकाले पनि लोकप्रियता कमाउन सहज भएको हो ।
राजापुरकी शर्मिला चौधरी, कैलालीकी सुमित्रा चौधरी, सोनु कुस्मी, राधा चौधरी, बाँसगढी नगरपालिकाकी ऋतु नानु, बाँके च्यामाकी निर्मला चौधरीलगायतका दर्जनौं मोडल उत्पादन भएका छन् । उनीहरूले थोरै भए पनि पारिश्रमिक लिएर काम गर्छन् ।
युवा मोडल विवश चौकर, देवदास, विमल, रामदयाल, तेजराज, वीर चौधरी, सन्दीप बीसी, विकास बीआरडीलगायतका मोडल तयार भइसकेका छन् । पछिल्लो समय थारू भाषामा आधुनिक, डीजे भिडियो बढी सार्वजनिक हुने गरेका छन् । युवाहरूलाई लक्षित गरी भिडियो बनाउने गरिएका कारण डीजेले बजार पाएको हो । त्यसो त विभिन्न समूहले संस्कृति झल्काउने भिडियो निर्माण गरिहेका छन् ।
तर, युवाहरूको चासो भने डीजेमा बढी भएकाले निर्माताहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । ‘कलाकारका लागि दर्शक महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बजारमा जे बिक्छ, त्यसैको बजार माग बढी हुने हो,’ थारू गायक तथा भिडियो निर्माता विश्वसागर परियारले भने, ‘अहिले डीजे गीतको माग युवाहरूमा बढी छ । त्यसैले थारू भाषाका गीत पनि त्यसैतर्फ आकर्षित छन् ।’
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०८:५३
दुई साथीको कथामा ‘२ नम्बरी’
दयाहाङले रेखाको फिल्म कहिले खेल्ने ?
आमिरका लागि पछि हटे अक्षय
दौरामा ठाँटिएर ‘ग्रामी’ मा मनोज सिंह
विपिन नखेलेपछि पलको प्रवेश
नितेशजंग कुँवर फिल्म खेल्दै, अदितीसँग रोमान्स गर्ने !